Yahoo! Tsvaga Kushambadzira ... Wakandirasa! | Martech Zone
Direct Mail inzira inodhura. Nekuti inodhura, haigone kuitwa zvisirizvo. Ini ndaiwanzo kuudza vatengi vangu kuti mukana wekuwana kutarisisa kwemumwe munhu neDirect Mail yaive yakanangana nehurefu pakati pebhokisi ravo retsamba nemarara avo emarara. Chikamu chega chemushandirapamwe wekutumira tsamba wakakosha kudarika chakanangwa uye chidimbu kugona kuita pamushandirapamwe.
Nhasi, ini ndagamuchira runako rwakagadzirwa Direct Mail chidimbu kubva Yahoo! Tsvaga Kushambadzira. Chipo ichi chaive $ 75 kiredhiti kune rimwe kiyi rekushambadzira pane iyo Yahoo! injini yekutsvaga. Sezvo ini ndichangobva kuvhura pasocial network yeNavy Veterans, Ndanga ndichiedza kuyedza nemamwe mazwi makuru anotenga.
Iyo yakanaka kudhinda, chokwadika, ndeyekuti iwe unofanirwa kuisa $ 30 isingadzokeri dhipoziti muaccount. Izvo zvichiri madhora makumi mashanu nemakumi mashanu emadhora zvandaigona kunge ndakashandisa, zvakadaro, saka ndakaedza kusaina. ndinoti akaedza nekuti ini ndakasangana neiyi yekukanganisa meseji isiri pasi pe4 nguva mune yekunyoresa uye yekubhadhara maitiro
Direct Mail ine chinhu chimwe chakafanana nechero kushambadzira. Iwe unofanirwa kukwanisa kuendesa yako chigadzirwa kana sevhisi nekukurumidza iko tarisiro painopinda nemusuwo. Kusakwanisa kuburitsa kunokuvadza kupfuura kusashambadza zvachose. Ndiri kutarisira kuti iyi Yahoo! mushandirapamwe waive mushandirapamwe wekuenzanisira wakatumirwa kune vashoma vanhu kuyedza kugona kwesystem yavo kubata kunyoresa nekutenga… asi chokwadi chingangodaro chakapesana. Vakandirasa! Mushure me4 kuyedza, ini handisi kudzoka.
Yahoo! angangodaro akashandisa mazana ezviuru zvemadhora pane ino yakananga tsamba chidimbu. Uye murombo wekushambadzira Director, uyo akagadzira chinonakidza chidimbu, anogona kupomedzerwa mhosva yekusaita mushandirapamwe
Kunze kwekunge, chokwadi, Yahoo! zvinoitika kuverenga blog yangu. 🙂
Tags: actonGleansterKushambadzira automation kambaniKushambadzira otomatiki vanopakushambadzira otomatiki ratingsKushambadzira otomatiki mushumokushambadzira otomatiki wongororomultivariate kuyedzapeji kuyedzwakurudyi pane kudyidzana